| "सिटमामात्र यात्रु राख्न‍े भए सरकारले इन्धन दिनुपर्ने!": नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ
"सिटमामात्र यात्रु राख्न‍े भए सरकारले इन्धन दिनुपर्ने!": नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ
काठमाडौं, १२ असोज: भौतिक, योजना, पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखकसँग नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले गाडीको क्षमता अनुसार यात्रु बोक्ने भए सित्तैमा तेल दिनुपर्ने शर्त राखेको छ। महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले जनाएअनुसार क्षमता अनुरुप यात्रु लैजाँदा व्यवसायी नोक्सानीमा पर्ने भएकोले तेल अनुदानमा दिन प्रस्ताव गरेको हो।
'हामी क्षमता अनुसार यात्रु लैजान तयार छौं। तर क्षमता अनुसार यात्रु लैजाने र फर्किदा रित्तै आउनुपर्ने भएकोले व्यवसायी नोक्सानीमा पर्छन्,’ उनले भने, ‘यो राष्ट्रिय पर्वमा सरकारको पनि दायित्व हुन्छ। त्यसैले हामीले सरकारसँग तेल उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छौं।' उनका अनुसार व्यवसायीले राखेको मागमा सरकार सकारात्मक छ।
सिटौलाले मुलुकका विभिन्न स्थानमा सडक पुर्ननिर्माणको काम समेत नहुँदा व्यवसायीले बढी नोक्सानी ब्योहोर्नुपर्ने भएकोले तेल दिने विषय ठूलो नभएको दाबी गरे। यातायात व्यवसायीले तेर्स्याएको माग अव्यवहारिक मात्रै होइन गैरकानुनी समेत भएको उपभोक्ता अधिकारकर्मीले बताए। राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले यातायात व्यवसायीको मुडेबलका अगाडि सरकार निरीह भएको बताउँदै यस्तो गैरकानुनी माग राख्ने माथि कारवाही हुनुपर्ने बताए।
'देशमा यातायात व्यवसायीको लुटलार्इ सरकारले टुलुटुलु हेरेर बसेको थियो। अब सरकारले नै अनुदान दिनेसम्मको प्रस्ताव आउन थालेछ,’ उनले भने, ‘योभन्दा लज्जास्पद विषय हुनै सक्दैन। यो एनार्किज्मको हो यो।' उनले यो निर्णय भएमा राज्यको ढुकुटीको जथाभावी प्रयोग गर्ने श्रृंखलालार्इ सुनिश्चित गर्ने बताए।
महासंघ यातायात व्यवसायीको छाता संगठन हो। यही संगठन हो जसको अनुमतिमा मात्रै सार्वजनिक यातायात चलाउन पाइन्छ। महासंघ अन्तर्गतका यातायात समितिको सिन्डिकेटका कारण यात्रुले सहज रुपमा यात्रा गर्न समेत पाएका छैनन्।